Hihaino lainga sa hihaino ny Baiboly?
"Ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo… Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevon’ny ota… Koa raha ny Zanaka (Zanak’Andriamanitra) no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo." Jaona 8:32,34,36
7 ora sy sasany: Samy mangina izahay sy ny mpamily fiarakaretsaka mitondra ahy any amin’ny hopitaly. Izy mifantoka amin’ny fitondrana fiara, izaho mieritreritra ny tontolo andro miandry ahy… Fampielezam-peo maneno moramora no hany re. Injay ny mpanolotra fandaharana fa nampahafantatra ny vahininy, izay mpahita, ary nanamarika hoe afaka miantso ny mpihaino, raha te hametra-panontaniana. Nisesisesy ny antso, ary ny valinteny nomena dia tsy nilana akory fahaiza-mahita! Matetika dia teny hendry fotsiny ihany, na teny misy hevi-droa…
— Tsy misy inoako izany! hoy ilay mpamily ningonongonona.
— Izaho kosa, hoy aho, mahafantatra boky iray mirakitra faminaniana an-jatony, ary maro amin’ireny no efa tanteraka.
— Hay! Inona izany boky izany?
— Ny Baiboly.
Taitra ilay mpamily, ka najanony ny fampielezam-peo, ary dia nanomboka niresaka izahay.
8 ora sy sasany: Nony tonga izahay dia nisaorako ilay mpamily. Lasam-binany izy, ary hitako tamin’izany fa nanohina azy ny resakay…
Mahagaga fa matetika dia ireo olona mandà tsy hamaky ny Baiboly no mijery filazana tononandro na manatona mpahita. Aleo mihaino feo manambara izay tiana ho re, na lainga aza.
Eny, mety hankaharary ny mandre ny marina, saingy ny fahalalana izany dia mampitombo sy manasitrana antsika. Mariky ny fitiavana, ny fanambarana ny marina. Izany no ataon’Andriamanitra ao amin’ny Baiboly, na dia sarotra henoina aza indraindray. Tsy sanatria hamela antsika hangirifiry eo fotsiny Izy, fa manolo-tanana kosa, mba hanafaka antsika amin’izay zavatra mangeja. Aoka hatoky Azy, dia hanafaka antsika ny marina!